News: कैलालीका किसानलाई खेतमै दसैं
shudeshna.smartkrishi@admin.com Krishipost.com 2021-10-12 15
घरघरमा जमारा राखिएका छन् । कतै चर्खे पिङ त कतै दसैं मनाउँन गाउँ फर्किएकाहरू आफन्तसँग भेटघाटमा रमाइरहेका छन् । कोही दसैं मनाउँन घर पुग्दै छन्, नजिक हुनेहरू कोही घर जाने तरखरमा छन् । यतिवेला हिन्दुहरूलाई महान चाड दसैंको उल्लासले छोइसकेको छ । शहरीयाहरू गाउँ केन्द्रित हुँदा गाउँको वातावरण दसैंमय बनेको छ ।
किसानलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता खेती भित्र्याउन हुने गरेको उनले बताए । ‘जसरी परिवारका सदस्यको माया हुन्छ, त्यसरी नै खेतमा लगाएको बालीको पनि माया लाग्ने गर्दछ,’ भट्टले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई बिर्सेर को रमाउन सक्दछ र ?'
कैलालीका अधिकांश स्थानमा असोजको दोश्रो सातामै धान पाकिसकेको भएपनि वर्षा नरोकिदा समयमै किसान खेतमा पस्न सकेनन् । जसले गर्दा दसैंमा किसानलाई धान काट्न भ्याईनभ्याई छ । ‘यस वर्ष केही ढिला सम्म मनसुन सक्रिय भएपछि किसान धान काट्न हतारिएनन्,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ का किसान रामदाश रानाले भने, ‘असोज तेस्रो सातापछि मात्रै किसान खेतमा धान काट्न निस्केका छन्, त्यसैले यस वर्ष किसानको दसैं खेतमै होला जस्तो छ।’
एक दिन रमाएर वर्ष भरी भोकै बस्नुभन्दा खेतमै रमाउनु उचित हुने धनगढी–१२ का किसान केशव उपाध्याय बताउँछन् । ‘हुनत दसैं पनि वर्षमा एकपटक मात्रै आउँछ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘दसैं पनि मनाउनु पर्दछ, तर बालीलाई बिर्सेर दसैं मनाउन मनले मान्दैन, वर्ष भरी चाहिने अन्न नभित्र्याई कसरी दसैं मनाउनु ?'
यो वर्ष आवश्यकता अनुसार पानी परेकाले धान खेती राम्रो भएको किसानले बताएका छन् । खेती राम्रो भएकाले उत्पादन पनि बढ्ने अपेक्षा गरेको धनगढी-३ का किसान सोनु रानाले बताए ।